Cabdi Cadde “Dalabka qaadashada Kaarka Aqoonsiga ee Muqdisho waa dhaqaala raadis uu Xisbiga Damul Jadiid ku doonayo in uu doorashada ku galo”. | Voice Of Somalia
Cabdi Cadde “Dalabka qaadashada Kaarka Aqoonsiga ee Muqdisho waa dhaqaala raadis uu Xisbiga Damul Jadiid ku doonayo in uu doorashada ku galo”.
Posted on August 12, 2016 by Voice Of Somalia Image
Taliska guud ee Nabad sugidda dowladda Federaalka ayaa shalay malaayiin qof oo ku nool magaalada Muqdisho ku amray in ay qaataan Kaar cusub oo loogu magac daray “Kaarka aqoonsiga muwaadinimada”.
Siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Banaadir ayaa ka jawaabay warka kasoo baxay nabad sugidda waxayna ku tilmaameed mid dhaqaala doon ah oo marnaba aan la qaadan Karin.
Siyaasiga Cabdi Cadde ayaa sheegay in Gaafoow uu doonayo in lacago malaayiin dollar ah uu hadiyad ahaan usiiyo Xasan Gurguurte isagoo uga mahad celinayo xilka uu u magacaabay kadibna uu bilaabay mashruuc cusub oo lacag looga dhacayo shacabka masaakiinta ah.
“Kaarka aqoonsiga ee shacabka Muqdisho lagu amray in ay qaataan waa mid dhaqaala doon ah taas waxaa ka wanaagsaneed in si caadi ah ay ganacsatada lacago tabarucaad ah uga codsadaan, doorashada soo socota ayuu Xisbiga Damul Jadiid ku doonayaa in uu dhaqaale hor leh u helo”ayuu yiri Cabdi Cadde.
Laba sanadood ka hor waxaa amar midkaan lamid ah soo rogay Muungaab guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir balse 98% shacabka Muqdisho maqaadan kaarka Aqoonsiga sababa la xiriira iyagoo u arka mid lagu jaasuusayo islamarkaana aan wax wanaag ah soo kordhin Karin.
“Qofka muslimka soomaaliga ah marka uu dhasho ayuu soomaali yahay waligiisna waa ahaanayaa maxay tahay aqoonsiga uu uga baahanyahay xukuumad Taangiyo shisheeye lagu ilaaliyo”ayuu hadalkiisa sii raaciyay siyaasi Cabdi Cadde.
Salaad Cali Jeelle iyo Maxamuud Nuur Tarsan ayaa horay uga digay in Xasan Gurguurte uu dhaqaale hor leh ka dhaco bulshada Muqdisho inta uusan waqtigiisu idlaan lacagtaas oo uu u adeegsado laaluushidda xildhibaanada ka hor doorashada.
DHAGEYSO:-Qorshahan ay ku heshiiyeen hada duqa magaalada Muqdisho Madaale “Boorsaani” iyo Gaafow,waxaa horey ugu heshiiyay Gaafow iyo Tarsan, waana socon waayay.
Maxamuur Nuur Tarsan oo leh” Lacagta hallagu shubo Dahabshiil”
Waxaan Falanqeynayaa Safarka Lagu Sheegay Taariikhiga Ee Xasan Sheekh Ku Tagey JIGJIGA
Itoobiya Oo Xirtay Xuduud Beeneedka Ay La Wadaagto Galgaduud